Shayela kule planethi eliseduze ilanga! Futhi iplanethi elikhulu uhlelo lwethu? Futhi bangaki kubo bonke, eqinisweni? Akuwona wonke umuntu uwakhumbula ngokushesha izimpendulo zale mibuzo. Ngisho ngaphezulu uyoba umangale yilabo zazikholelwa ngobuqotho ukuthi wayazi izinto ezilula. Ngo umkhuba kuvela ukuthi ukufunda izinkanyezi yisayensi ashukumisayo kakhulu futhi ulwazi kuba akusebenzi ngendlela emangalisayo okusheshayo: kubonakala amaqiniso obungenakuphikwa ngemva kweminyaka embalwa uthole ilungiswe noma ngaphezu. Futhi isithombe yonke ubukeka kakade ngempela ngendlela ehlukile!
Shayela iplanethi eseduze to the Sun.
Eliseduze iplanethi inkanyiso kuyinto Mercury. It has usayizi encane kakhulu, isakhiwo enamadwala. A ukusondela ukuba ilanga kubangela ukushisa engacabangeki phezu. Mercury iyona iplanethi esheshayo ohlelweni lwethu. Isikhathi Ukujikeleza kuyo uzungeza ilanga 88 izinsuku Earth.
Futhi manje igama eliwumhlaba kule planethi! Iplanethi eziseduze Sun, siye zikhunjulwe. Ithiphu: Ngaphezu Mercury, uye Venus, uMhlaba ne-Mars abahlukene eminye imihlaba azungeza inkanyezi, ibhande elisemkhathini. Ngakho-ke babizwa amaplanethi eliwumhlaba.
Zonke iplanethi Venus
Ukuze lingakanani, Venus iseduze Earth, kancane kuphela ngemva kwakhe. Nokho, isimo kule planethi obukhulu kakhulu, izikhathi eziyishumi luthe ukuqina kuka eMhlabeni, futhi bekushisa. Lezi zici nobuntu emkhathini kubangele umbala obucayi le planethi, yena kwahlonzwa ne- nkulunkulu lensikazi uthando okuyiwona. Kuyathakazelisa ukuthi lapha izolo ebusuku amaningi njengoba 243 izinsuku lonke eMhlabeni, kodwa esifushane kuka ngonyaka Venusian - izinsuku 225 nje. Ngaphezu kwalokho, kuyinto uwukuphela kweplanethi esimisweni sethu sonozungezilanga ukuthi uzungeza kwewashi. Ngokuvamile wamukela incazelo lesi simanga akuyona.
Mars - samuntu neMpi.
umzimba libomvana besibhakabhaka esinezinkanyezi e kubantu abaningi basendulo ezihambisana ngomlilo nasekubhujisweni. Eqinisweni, sibonga eliyingozi kusho yakhe Mars lethiwa, ekubeni in izinganekwane laseRoma, god of war. Khona kule planethi, ke iyintaba ephakeme kunazo zonke e zesimiso sonozungezilanga. Olympus Mons cishe 27 km ubude, kakusekho lethu elingumhlaba izikhathi Everest ezintathu. Mars kakhulu oluneziqhingi eziningi zigodi emikhulu. Ezinye zazo yilezi ukuma yinqaba ukuze abantu wababuka ngokusebenzisa isibonakude, singagcini nje ngokumlingisa ngesikushoyo ezisheshayo ukumemezela ngemvelaphi yokufakelwa lezi zokwakheka.
UJupiter Saturn - amaplanethi amakhulukazi
Kunjalo - lezi zasemkhathini kukhona imidondoshiya yangempela phakathi amaplanethi. Jupiter idlula mass Zomhlaba izikhathi 318. Kuyathakazelisa ukuthi olwenzeka igesi. Mkhathi umhlaba emhlabeni kungenzeki, ngoba akanawo esiqinile, futhi bahlanganisa ikakhulu hydrogen ne-helium lokusebenza. Saturn idlule nenqwaba Umhlaba imayelana 95 izikhathi, nakuba naye akuyona umzimba siqinile ukumelwa yasemhlabeni. Udume izindandatho zawo okumelwe zigcinwe, kuyabonakala emhlabeni. Basuke kwakhiwa kusuka uthuli iziphuphutheki encane azungeza i orbit. satellite kuphela ucishe enkulu Saturn has 62.
Uranus - iplanethi nge izinyanga eziningi.
Kuwo wonke amaplanethi Uranus iyona elula. Sici Its ezithakazelisayo ukuthi uzungeza kunjengokungathi ngohlangothi yayo.
Neptune - iplanethi we Solar System
Neptune mass izikhathi 17 mkhulu kunomhlaba. I kwabantu of liphinde ngenhla Earth. Neptune has nantathu izinyanga, esikhulu kunazo zonke okuthiwa Triton. Nguye kuphela umngane kwamaplanethi ohlelweni lwethu, esishukumisela kolunye uhlangothi.
Futhi yini umzimba uqeda chungechunge?
Futhi manje ubuza, iplanethi zokugcina azungeza Sun, igama! Iplanethi eziseduze Sun, igesi giant iplanethi nge indandatho kanye satellite elikhulu Neptune, siye okuthiwa kakade, kodwa njengoba kunjalo imingcele isimiso sethu sonozungezilanga? Uma ucabanga ukuthi lokhu Pluto, uku okungalungile. Eminyakeni embalwa edlule impendulo kwakuyoba kweqiniso, kodwa hhayi namuhla. Ngemva kokutholakala Pluto, ezinye akuzona zingaphansi kwakhe e inani emizimbeni, kodwa hhayi kokudlulela uzungeza emzileni ecacile kwamaplanethi, izwe ososayensi umbuzo: "Yini, empeleni, ngokufanele ngokuthi iplanethi" Umqondo Weningi kwaba kanje. Iplanethi kumele:
1) azungeza Sun;
2) kube usayizi esanele ngaphansi amandla adonsela phansi yayo siqu ukuthatha ukuma eyindilinga;
3) ukusula indlela orbit for yena, kunokuba ukuya ngaphansi kwethonya nezinye izindikimba.
Maye, Pluto alihlangani lezi nemingcele, kanye imizimba eminingi kule okuthiwa Kuiper ibhande, wavula emaphethelweni sonozungezilanga kule minyaka eyishumi eyedlule: Eris, Sedna, nabanye.
Amaqembu wobudala. , Ubusha, ukuguga
Isazi Kirill Butusov: Biography nokutholakala. Ukuhlola sonozungezilanga
I-Mysteries of Mars
Yikuphi okungcono - plastic noma MDF ekhishini: kobufakazi. Ikhishi eyenziwe ngepulasitiki: amathiphu, ukubuyekezwa
Hair Dye L'Oreal: isitayela Iphalethi
Toxoplasmosis iyathelelwana noma cha? Toxoplasmosis: izindlela zokutheleleka, uphethwe, zokuvimbela
Indlela ukuqeda tinnitus: imithi, amakhambi abantu, ikhanda massage
Ilkovskiy Konstantin Konstantinovich: Biography, izithombe umndeni
Amnandi Futhi kuvuthwe bhisikidi ikhekhe